MPP Ye Myint
I wanted to say that our country is likeapatient suffering from cancer. Sule Pagoda is in downtown Yangon. Pagodas are always peaceful and quiet. But Sule only gives you noise and chaos. It has to stand in the middle of all kinds of problems. All the cars. People walk around the pagoda, but they struggle to make ends meet. So they rarely go in. Cancer isahorrifying disease. Everything in our country from religion, education and the judiciary to civil war is suffering from cancer. I felt that when I was working on this series.
There’s beenalot of development in art in the past decade. I restarted my career as an artist in 2012. I didn’t stage any exhibitions at all under the military government. The bastards at the censorship board abused me so much. This was especially true for modernist painters. The entire art scene was likeacancer. As I didn’t like the censorship board, I didn’t participate in any group or solo shows. In 2012, the Thein Sein administration allowed media freedom and we could stage exhibitions. Until now, I’ve mostly staged solo shows. In the past, there were very few female artists. Now there are lots of exhibitions with female artists. It’s wonderful. And we have international connections.
The current situation is not encouraging. Everything. I think we have to work hard for three more decades to reach where we want to be because our eyes and ears were shut for five decades. I think if they’d genuinely transferred power to Mother Suu after the 1990 election, we’d have been inagood position. It’sapity we lost so much time. I can’t be optimistic. I can only feel five percent optimistic for our country. Even the members of parliament and ministers from Daw Suu’s group who endured troubles are now corrupt. Even the tough ones who inscribed their names in history are corrupt. If we examine it thoroughly, our country has made only five percent progress.
ဒီပန်းချီကားကို ဘာလို့ ဆွဲတာလဲ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံက ကင်ဆာဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ လူနာလို ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံလို့ ပြောချင်တာပါ။ ဆူးလေက မြို့လယ်ခေါင်မှာဗျာ။ ဘုရားဆိုတာ အမြဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် အေးချမ်းတာပေါ့။ အခု ဆူးလေကို မြင်ရတာက ရှုပ်ထွေး ဆူညံ နားငြီး၊ ပြဿနာတွေပေါင်းစုံကြားထဲမှာ ကျနော်တို့ ဆူးလေက ရောက်နေရှာတာ။ ကားတွေ အကုန်လုံးဗျာ။ လူတွေကလည်း ဘုရားဘေးသာ ပတ်သွားတယ်။ ကိုယ့်စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန် နေကြရတာလေ။ ဘုရားပေါ်တက်တဲ့ လူတောင်မှ တော်တော်ရှားပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါဆိုတာ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အကုန်လုံး ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ တရားဥပဒေ၊ ပြည်တွင်းစစ် အကုန်လုံးက ကင်ဆာဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်။ အဲ့လိုခံစားပြီးတော့ ကျနော် အဲ့စီးရီးကို ရေးတာ။
ဆယ်စုနှစ်မှာ ပန်းချီကို ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ ကျနော်ဆိုလို့ရှိရင် ၂၀၁၂ မှာ ပန်းချီလောကထဲကို ပြန်ဝင်တာ။ စစ်အစိုးရခေတ်မှာ လုံးဝပြပွဲမလုပ်ဘူး။ group show တွေလုပ်လို့ solo show လုပ်လို့ စိစစ်ရေးဆိုတဲ့ကောင်တွေ နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ကို ခံရတယ်။ အထူးသဖြင့် မော်ဒန် ပန်းချီဆရာတွေခံရတာပေါ့။ တော်တော်ရုန်းရကန်ရပြီးတော့ ပန်းချီလောကက ကင်ဆာဖြစ်နေခဲ့တာပဲ။ အဲ့တော့ ကျနော်က စိစစ်ရေးကို မကြိုက်တဲ့အတွက် ပန်းချီပြပွဲကို group show လည်းမလုပ်ဘူး။ solo show လည်းမလုပ်ဘူး။ ၂၀၁၂ ကျမှ သိန်းစိန်စတက်တဲ့အခါကျတော့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လေးရလာတော့ ပြပွဲတွေလုပ်တယ်။ လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဒီနေ့အချိန်ထိ solo ပြတာ များတယ်။ ကျနော်တို့ ခေတ်တွေတုန်းကဆို မိန်းကလေး ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရှိတာ။ အခုဆိုရင် အမျိုးသမီးပန်းချီပြပွဲတွေ အများကြီးလုပ်လာတော့ သိပ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ ပြည်ပအဆက်အသွယ်တွေလည်း ရလာတယ်။
လက်ရှိအနေအထားအရ ကျနော်အားမရဘူး။ ဘက်ပေါင်းစုံပဲ။ ဒီက မျိုးဆက်တွေ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်လောက်အကုန် မျက်စိပိတ် နားပိတ်နေလာခဲ့ရတာကြီးကို နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက် ကြိုးစားမှ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တဲ့နေရာကို ရောက်မယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ ကျနော်မှန်းတာက အမေစုကို ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရိုးရိုးသားသား မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အာဏာပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ကယ့်အနေအထားက တော်တော်ကို ကောင်းနေပြီပေါ့။ အဲ့ဒီနှစ်တွေက သိပ်နှမြောစရာကောင်းတယ်။ အကောင်းမြင်ဖို့ ကြိုးစားလို့ကို မရဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားက ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အကောင်းဘက်က တက်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဒေါ်စုတို့ထဲက တစ်ကယ် အဖမ်းခံရ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်ခဲ့ရတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တို့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအစ ဖောက်ပြန်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးခဲ့တဲ့လူကိုယ်တိုင်က ဖောက်ပြန်ကုန်တာပဲ။ တစ်ကယ့် မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်တွေ့သုံးသပ်ခံစားလိုက်တဲ့အခါမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ တိုးတက်တယ်။